Ikwu Okwu Na-adịghị Echebe Aha Gị | Martech Zone
Nnwere Onwe Adighi Echebe Aha Gị
Fraịde, Jenụwarị 27, 2012 Fraịde, Jenụwarị 27, 2012 Douglas Karr
Sam Montgomery bụ onye na-agụ Martech Zone ma kpọtụrụ m banyere akụkọ banyere otu nwa agbọghọ na-eto eto aha ya bụ Yuri Wright. Yuri na-eweghachi Yuri n'ọrụ ruo mgbe ụfọdụ ndị na-agụ ya tweet. Na A na-egosipụta tweets na Egwuregwu Nkata na-adịghị ize ndụ maka ọrụ (NSFW)… nanị mara na ha mara mma rụrụ arụ.
Yuri Wright, 4-kpakpando CB si New Jersey, ka a ga-aga Michigan na klaasị 2012. Na mbido ọnwa a, ndị ọrụ nkuzi nkuzi nke Michigan lebara anya na atụmanya ahụ mgbe onye ọ bụla nwere nsogbu zigara ụlọ akwụkwọ akwụkwọ okwu ndị Yuri dere na akaụntụ Twitter ya nke agbụrụ na nke mmekọahụ.
Ekwuru m n'ezie na ọtụtụ mahadum banyere nke a wee gwa ụmụ akwụkwọ ahụ ihe nile ha na-edekọ na mgbasa ozi mgbasa ozi taa bụ ihe ga-emetụta atụmanya ọrụ ha n'okporo ụzọ. Arefọdụ na-eju, ọtụtụ na-eche na ọ bụ ikenenke… ma nke bụ eziokwu bụ na onye Ndị a na-akpọ Michigan bụ ihe ngosipụta nke mahadum ha.
Michigan họọrọ ihe kwesịrị ekwesị dabere na ọnọdụ ahụ. Ekwenyere m na Mr. Wright mụtara ihe mmụta siri ike, kwa. Ekwenyesiri m ike na ọ bụ naanị ọnụ ka m ga-eso ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya nweta ụfọdụ isi wee chịa ọchị. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ome nto ochi, ọ ga-adị mma… ma ebe ọ bụ na a n'ọrụ nke a University na elu visibiliti, nke a bụ ihe mere.
Omume ọ bụla ị mere n'ịntanetị nwere nsonaazụ. Ọ bụ ya mere na enweghị ụdị ihe ahụ nghọtaỌ bụ karịa ịdị iche iche. Anaghị m emejọ ndị mmadụ na ntanetị, mana ana m atụfu ndị na-eso ụzọ site n'oge ruo n'oge na-anaghị eche banyere ihu ọchị m.
Mgbe m na - ekwu ihe dị egwu, anaghị m etinye onye na - eso ụzọ m egwu, ana m etinyekwa ndị na - akwado blọọgụ m na ndị ahịa m. inbound ahịa gị n'ụlọnga. Onweghi uzo m gha aputa! M hụrụ n'anya anya-agba njakịrị… ndị ọzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezighị ezi, na ike m Elezie na-achị ọchị. Ọ bụ naanị echiche m, mana eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla na-echegbubiga onwe ya ókè n'oge a dị egwu - ọkachasị ka ndụ anyị na-egwu n'ịntanetị.
Enwere m ike ibi na eziokwu ahụ na m tufuru onye na-eso ụzọ m na, ikekwe onye na-agụ ya, mana ọ ka na-enye m nsogbu. O wutere m na o nwere onye nọ n’ebe ahụ m chere na m bụ onye m na-abụghị. Ma m ga-etinye ya n'azụ m ma gaa n'ihu. Ezughị m oke, m ga-amị amị otu mgbe. Ma… ụfọdụ ndị agaghị achọ m. Ọ bụ naanị eziokwu dị mfe.
Ma m kechioma… Ọrụ m anaghị amalite. Abụghị m onye na-ewe ndị ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ nke onye ọ bụla. Enweghị m ike iche ebe m ga - anọ na ndụ ma ọ bụrụ na e nwere foto Facebook, Twitter - ma ọ bụ ka njọ - Youtube mgbe m dị afọ iri na ụma. A bụ m kpamkpam enweghị nchịkwa. Enwere m ike ịrụ ọrụ siri ike ebe!
Ndi enye ama odot udiana ifet? Ee… anyị niile na-eme. Obi dị m ụtọ na o nwetara otu mgbe CU tụtụrụ ya:
Emere m nnukwu ndudue, "Wright kwuru. Amụtara m ezigbo ihe na Baịbụl, m na-ekwekwa nkwa na ụdị ihe ahụ agaghị eme ọzọ. Onye ọ bụla maara m maara na nke ahụ abụghị ezigbo agwa m ma ọ bụ onye m bụ n'ezie. Agaghị m anọdụ ala ebe a ma gbalịa ma ngọpụ maka ihe m mere. Naanị m ga - abụ nwoke ma kwuo na m hiere ụzọ ma m mụtara ihe na ya.
Knowsnye maara… otu ụbọchị ị nwere ike ịchọ ohere nke abụọ, kwa. Ka anyi ghara ime ihe nzuzu n’ebe ahu, ndi be anyi! Ndị mmadụ na-ekiri… na ọtụtụ ndị enweghị ihu ọchị.
Tags: footballbọlbụ ndị agba bọọlụMichiganTwitteryuri wright
27% nke ndị na-ere ahịa enweghị atụmatụ mbadamba… Ma!
12 Critical Home Page Ele